Virgil van Dijk Oo Sharraxay Sababtii Dhabta Ahayd Ee Uu Liverpool Uga Doortay Manchester City & Dalabkii Uu Ka Helay Pep Guardiola - Gool24.Net
Virgil van Dijk Oo Sharraxay Sababtii Dhabta Ahayd Ee Uu Liverpool Uga Doortay Manchester City & Dalabkii Uu Ka Helay Pep Guardiola
10/05/2020 Abdiwahab A. Abeye
Difaaca Liverpool ee Virgil van Dijk ayaa sharraxay sababtii dhabta ahayd ee uu ku diiday Manchester City oo tababare Pep Guardiola uu doonayay inuu lasoo saxeexdo, isla markaana uu uga doortay Liverpool.
Van Dijk ayey Liverpool kaga soo iibsatay Southampton lacag dhan £75 milyan oo Gini bishii January ee 2018, waxaanu markiiba noqday aasaasi u horseeda Reds inay sigto Champions League, halka xili ciyaareedkii dambena uu kula guuleystay Champions League, sidoo kalena ay Man City dirqi kaga qaadday Premier League.
Ka hor intii aanay Liverpool ku dhawaqin heshiiskiisa, waxa doonayay dhawr kooxood oo Premier League ah oo ay ku jiraan Manchester City, Arsenal iyo Chelsea, laakiin Jurgen Klopp ayaa dalabkii ugu macquulsanaa hor-dhigay Southampton, halka uu Van Dijk si gaar ah u xushay Liverpool.
Virgil van Dijk ayaa la weydiiyey sababtii uu ku kala doortay kooxahan, waxaanu yidhi: “Ka hor intii aanan go’aanka ku gaadhin inaan doorto Liveprool, waxaan fiiriyey dhamaan asxaabaha kooxaha; qaabka ay u ciyaaraan, ciyaartoyda ay haystaan iyo sidoo kale mustaqbalka.
“Waxa qayb weyn ka qaatay inaan ku biiro kooxda, magaalada iyo taageereyaasha kooxda. Waxayna ila tahay in waqtigaas ay Liverpool ahayd go’aankii saxda ahaa, waxaananu gaadhnay finalka Champions League lixdaydii bilood ee ugu horreeyey, taas oo ii ahayd dhiirigelin weyn, in badanna iga caawisay inaan horumar badan sameeyo, gaar ahaan dhinaca khibradda.”
12 bilood kaddib markii ay finalka tageen ee ay Real Madrid koobka ka qaadday, waxay magalaada Madrid iskugu yimaaddeen Tottenham oo ay finalkii ku garaaceen, waxaana Van Dijk loo doortay xiddiga sannadka ee Ingiriiska. Waxa ugu xigay oo uu kooxdiisa la qaaday UEFA Super Cup iyo FIFA Club World Cup, halka ay ku dhow yihiin inay hantiyaan horyaalkii ugu horreeyey ee Premier League ah tan iyo sannadkii 1990-kii.